ENTREPRISE :ECOBRIK - DES BRIQUES ÉCOLOGIQUES - TVMADA - RADIOMADA
TVMADA - RADIOMADA > ECOLOGIE > ENTREPRISE :
Ny biriky dia singa iray hanaovana ny trano malagasy, raha beton ny an-drizareo any ivelany dia biriky kosa ny antsika Malagasy. Tsy ny trano ihany anefa no ampiasaina ny biriky fa taty aoriana dia nampiasaina ihany koa izy taminà fomba fitenenana. Matetika rehefa misy fanorenana tokatrano na mariazy hoy ny filaza azy dia hoharina amin’ny biriky ny ezaka hataon’ireo mpivady ao amin’ny tokantrano. Ny tsipaipaika ihany koa dia nomena anarana hoe “anjara biriky”, midika fa fandrafetana ny asan’ny biriky hahazoana foto-drafitr’asa lehibe iray.
Noho izany dia lafo ny vidim-biriky, ankehitriny dia mahatratra 100Ariary ny biriky iray, ny antony dia mbola dingana maro no natao vao mahazo biriky iray. Izay no antony tena mahalafo azy ity. Amin’izao fotoana izao dia nisy vondrona mpianatra ao amin’ny resaka fananganana foto-drafitr’asa nanao fikarohana ao amin’ny ISCAM dia namorona biriky hafakely satria tsy mila fandrahoana ny biriky vitan’ny ECOBRIK fa tany mena miampy simenitra na “Chaux” miampy rano dia hahavitana biriky mafy dia mafy. Ary ambonin’izany, ny tombotsoa azony dia tsy ilàna “mortier” ny fametahana azy rehefa mandahatra hanao trano. Izany hoe tena mampihena tokoa ny kojakoja vidiana rehefa hanao trano ity biriky vitan’ny ECOBRIK ity.
Raha ny resaka vidiny kosa indray dia lafo izy raha vidiana an-tsinjarany fa heverina kosa anefa fa hahazoana tombony izy raha vidiana amin’ny “au mètre-carré”.
Zava baovao tokoa ity famoronana biriky nataon’ny mpianatra avy ao amin’ny ISCAM ity, satria matetika dia tsy ny vidin’ny biriky no mahalafo ny fanamboarana trano fa ireo kojakoja toy ny simenitra, ny fasika. Fa heverina kosa anefa fa hampihena ny fanaovana trano ity zava-baovao nataon’ireto mpianatra avy ao amin’ny ISCAM ireto ity.
M. Fanilo Ratefinjanahary
Tel Madagascar : +261 (0) 33 74 971 53